Wiil Uu Dhalay Madaxweyne Trump oo Laga Helay Cudurka COVID-19 | Allbalcad Online
Home CAALAMKA Wiil Uu Dhalay Madaxweyne Trump oo Laga Helay Cudurka COVID-19
Wiil Uu Dhalay Madaxweyne Trump oo Laga Helay Cudurka COVID-19
Wiil uu dhalay madaxweyne Trump oo 14 jir ah ayaa laga helay fayraska Korona balse sida ay sheegtay marwada koowaad ee Mareykanka, Melania Trump, wiilkaasi oo lagu magacaabo Barron ayaa cudurka haatan ka bogsaday.
Melina ayaa sheegtay in ay aad uga cabsatay xaaladda Barron kaddib markii laga helay cudurka Covid-19. Balse waxay intaa ku dartay in nasiib wanaag uu yahay wiil da’yar, sidaa awgeedna aysan ka muuqan astaamihii cudurkaasi.
Madaxweyne Trump iyo xaaskiisa Melina ayuu horey cudurkan u haleelay balse haatan ka bogsaday.
Trump ayaa markii dambe sheegay in wiilkiisa Barron uu xanuunkani hayay muddo aad u yar isla markaana uu ka bogsaday maadaama buu yiri difaaciisa jirka uu aad u wanaagsan yahay.
Waxa uu intaasi ku daray in Barron uu tusaale fiican u yahay carruurta dalkaasi Mareykanka iyo sida ay gagsi ugu yeelan karaan cudurkaasi, sidaa awgeedna ay tahay in iskoollada dalka dib loo furo sida ugu dhakhsaha badan. Arrintaasi ayaa waxaa aad uga soo horjeesaday ururka midowga macallimiinta dalkaasi, kuwaa oo ku doodaya in ay suurtagal tahay in macallimiin badan ay qaadaan cudurkaasi.
Xog uruurin la sameeyay saddex usbuuc uun ka hor doorashada dalkaasi ayaa lagu ogaaday in Trump uu taageero ahaan ka hooseeyo ninka la tartamaya ee Joe Biden.
Melina Trump ayaa dhankeeda sheegtay in Barron laga helay cudurkaasi muddo haatan laga joogo laba usbuuc balse markii dambe uu ka bogsaday oo baaritaan la sameeyay lagu ogaaday in uusan haatan qabin cudurkaasi.
Sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins, cudurka Covid-19 ayaa guud ahaan dalkaasi Mareykanka waxa uu soo ritay 7.8 milyan oo qof halka ay u dhinteen qiyaastii 216,000 oo qof.
Previous articleDowlada Thailand oo Kudhawaaqday Amar Lagu Joojinayo Mudaharaadyada
Next articleTaliyaha CXD oo Socdaal Kumaraya Deegaano Katirsan G/Gedo
Guddiga Doorashada Jubbaland oo badalay Jadwalkii ay horey u shaaciyeen
Shan kursi oo ka mid ah Golaha Shacabka oo lagu Doortay Baydhabo
Farmaajo oo Waraaqaha Danjirenimo ka guddoomay Safiirka Cusub ee Sacuudiga
Balcad News - January 19, 2022 0
Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka heer Dowlad Goboleed ee Jubaland SEIT ayaa shaaciyey in sixid lagu sameeyey jadwalkii hore ee shaacinta guddiga xulista ergada kuraasta lixda...
Shan kursi oo ka mid ah Golaha Shacabka oo lagu Doortay...
Wasiir Jamaal oo jawaab adag Ka bixiyay dooddii Xildhibaanka UK ee...
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal oo Gaaray Magaaladda Kismaayo
Wasiirka Gaashaandhigga oo Kulan la yeeshay Safiirka Dowladda Qatar
Wasiir ka tirsan Xukuumadda Rooble oo cabasho ka muujiyay doorashada kursiga...
Janeraalka Abuukar Xuud oo Lagu Soo dhaweeyay Magaaladda Muqdisho
Wasiir ka tirsan Xukuumadda Soomaliya oo loo doortay Xildhibaan Golaha Shacabka